Mpahay Lalàna momba ny fifanolanana momba ny fifanarahana ao Peoria, Illinois | Thomas Howard
Mpampiasa amin'ny fiadiana amin'ny alikaola
Amin'ny raharaham-barotra rehetra, fifanarahana iray ihany no misy rehefa afaka manaiky ny fepetra sy ny fepetra apetrany ny antoko rehetra. Raha misy ny tsy fitovian-kevitra, ary ny antoko iray no mandika ny fifanarahana, dia avy eo ny fifanolanana fifanarahana. Ny fifandirana amin'ny fifanarahana cannabis, toy ny fifandirana ihany, azo raikitra ao anatiny sy ivelan'ny efitrano fitsarana.
Io karazana fanitsakitsahana io dia mipoitra rehefa tsy manome araka ny nampanantenaina ny antoko iray. Amin'ny toe-javatra tahaka izany, tsy azo sarahina ny fifandraisana iray, ary afaka misafidy ny hiatrika ilay fety izay tsy nanaja ny ampahan'izy ireo ny antoko voakasik'izany.
Raha mandresy ny antoko voakasik'izany, ny ampahany hafa dia mandoa onitra. Ireo antoko dia afaka manapa-kevitra manangona zavatra ivelan'ny fitsarana ihany koa amin'ny fanampian'ny mpisolovava mahay. Ny fanafody hafa momba ny fanitsakitsahana ny fifanarahana dia misy fampisehoana manokana, ary fanafoanana sy famerenana indray.
Raha tsy fantatra amin'ny anarana hoe fanitsakitsahana tsy voafehy, ity karazana fanitsakitsahana ity dia tsy manapaka ny fototry ny fifanarahana izay midika fa mbola mitohy ny fifanarahana. Na dia tsy miova aza ny fifanarahana dia mbola afaka miantso fanasa fahavoazana ilay antoko tsy nandika ny fifanarahana.
Ny indostrian'ny cannabis dia tena voafehy tsara, ary satria mitohy ny fivoaran'ny lalàna dia ara-dalàna ny tompona orinasa eo amin'ny indostria mahita ny tenany amin'ny fifandirana. Eto no miditra ny litigatoran'ny fifanenan'ny cannabis.
Ireo mpisolovava manana traikefa ampy eo amin'ity sehatra ity dia afaka manampy amin'ny fanelanelanana sy ny fifamaliana eo amin'ny resaka fifanolanana. Rehefa manana mpisolovava za-draharaha ianao, dia afaka miaro ny lisan'ny fahazoan-dàlana sy ny fananana hafa izay mety atahorana raha misy fifanolanana.
Na dia tsy misy fifandirana aza dia betsaka ny olana momba ny fitsipika mifehy isaky ny mandeha. Ny mpisolovava dia manampy manome torohevitra ny tokony hatao raha te hanaraka ny lalàna amin'ny fotoana rehetra.
Izaho no mpisolovava Thomas Howard, ary miara-miasa amin'ny ekipa mpisolovava mahay aho amin'ny indostrian'ny cannabis. Ny orinasanay dia miorina ao Peoria, Illinois, izay anolorantsika torolàlana sy torohevitra ara-dalàna, ary koa manampy ny mpandraharaha amin'ny fananganana ivom-basy cannabis any amin'ny fanjakana. Raha mila mpisolovava any amin'ny faritr'i Peoria ianao, dia mifandraisa aminay, ary ho faly izahay hanampy.
Betsaka ny antony tokony hiarahanao miasa amin'ny orinasantsika. Ho an'ny iray, haintsika ny miady saina am-pitandremana ary miaro ny orinasan'ny mpanjifantsika sy ny fananany. Fantatsika tsara ny indostrian'ny cannabis ary fantatsika izay dingana tokony horaisina rehefa mila solontena ianao.
Na tsara kokoa aza dia manana traikefa an-taonany maro isika. Efa niasa nandritra ny fotoana elaela ny orinasanay, ary nahavita soa aman-tsara tamin'ny fifanarahana mpifaninana an-jatony izahay. Niatrika adihevitra momba ny fananana cannabis ihany koa izahay, fitsarana an-kianja ary fanelanelanana manokana.
Fantatray ny fepetra takian'ny cannabis rehetra arakin'ny lalàna hanampiana anao hiaro ny orinasanao. Fantatsika ihany koa ny tokony hatao rehefa mametraka ny fifanolanana izay niady tamin'ny lozabe ianao.
Na aiza na aiza faritra iasahianao dia azonao atao ny miresaka aminay, ary hanampy anao hamakafaka ny safidinao ianao eo am-piantohana fa manohy miasa amin'ny lalàna ianao.